Xog: Caawa oo aan laga seexan Hoteeladda Muqdisho iyo Olole xooggan oo ka socda. – Hornafrik Media Network
Xog: Caawa oo aan laga seexan Hoteeladda Muqdisho iyo Olole xooggan oo ka socda.
Olole xooggan ayaa caawa ka soconaya Hoteeladda Muqdisho, kuwaas oo ay kala wadaan Kooxo kala taageersan Wasiir Xoosh iyo kuwa doonaya in Baarlamaanku uu kalsoonidda kala laabto. Waxaana Caawa si wayn looga dareemayaa Ololayaashan Hoteeladda ay Siyaasiyiintu ku badan yihiin ee Muqdisho.
Wariyayaasha Hornafrik oo tagay Hoteelo ay ka mid yihiin Jaziira, Maka Al Mukarama, City Palace, iyo kuwo kale waxay ku soo arkeen Ololihii ugu xoogganaa oo halkaasi Caawa ka soconaya. Waxaana la kala xod xodanayaa Xildhibaanadda oo qolo kasta ay doonayso inay dhinaceeda u codeeyaan.
Hornafrik waxay sidoo kale ogaatay in Ololahan ay si buuxda qayb uga tahay Xukuumadda Somalia. Waxaana Hoteel Jaziira Caawa ku sugan Wasiiro ka tirsan Dawladda Somalia oo u qaybinaya Sunuud aan la shaacin Cadadkeeda Xildhibaanadda, iyadoona sidoo kale ballanqaadyo loo samaynayay Xildhibaanadda ay ka mid yihiin in Dhaqaale kale la siin doono haddii ay codeeyeen.
Xildhibaano kale oo Miisaan ku dhex leh Baarlamaanka ayaa iyaguna olole xooggan ka wada Hoteeladan, Isla markaana ku qancinayay Xildhibaanadda inay kalsoonidda kala laabtaan Wasiir Xoosh oo ay ku eedaynayeen inuu meel ka dhac u gaystay Baarlamaanka Somalia.
Wasiir Xoosh oo hadda ku sugan Nairobi ayaa iska fogeeyay inuu wax ka qoray Baarlamaanka, Wuxuuna sheegtay in laga jabsaday Facebook kiisa, balse halka uu wax ku qoray Wasiirku maba ahayn Facebook ee waxay ahayd Bartiisa Twitter-ka.
Wasiir Xoosh ayaa haddii ay Bari Kalsoonidda kala laabtaan Baarlamaanka Somalia waxay billow u noqon kartaa in Xukuumadana Mooshin laga keeno, ama sidan oo kale Wasiiro kale Kalsoonidda lagala laabto.
Hay’adaha Dawladda ayaa u muuqda inuu soo wajahayo Qalqal Siyaasadeed iyo is haysad Dhexdooda ah, Waxaana Khilaafaadkan ku lug leh Hay’adihii loogu laaban lahaa Waxyaabaha la xiriira Shuruucda Dalka ee lagu murmo sida Baarlamaankii, Maxkamadihii, Garyaqaanka Guud, Wasaaraddii Dastuurka iyo Hay’ado kale oo Muhiim ah, iyadoona la tuhunsan yahay in Madaxda Dawladdu ay wax ka karinayaan arrimahan maadama aysan soo faragalin.
Xiisaddan Siyaasadeed ayaa ah tii 2-aad ee soo wajahda Dawladda Somalia tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu Dalka ka dhacay Isbadalka Hogaamineed 8-February ee Sannadkan, iyadoona Xiisadan tii ka horaysay oo u dhaxaysay Masuuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha ugu dambayn la xaliyay.
Somalia oo ah Dal ka soo kabsanaya Dagaalo waxaa wali caqabad ku ah Khilaafaadka Siyaasadeed ee u dhaxeeya Hay’adaha Dawliga ah, kuwaasoo niyad jab ku abuura Soomaalida iyo Beesha Caalamka. Waxayna Dad badan is waydiinayaan waxay Madaxda Dawladdu arrimahan uga hadli la yihiin.
Garyaqaanka Guud oo ka hor yimid Go’aankii ay Baarlamaanka Somalia ku laaleen Amarka Maxkamadda Sare.
Baarlamaanka oo Maanta Go’aan ka gaaraya Xilka Wasiirka Dastuurka, Muxuu noqon karaa Go’aankaasi,?